Manje Sesiyazi Abesifazane Bakhetha Lo Sayizi Wepipi, Sibonga ama-3-D Printers - Ucansi-Uthando-Impilo
Kwenzekani lapho kuhlangana ucwaningo ngokuthandwa ngosayizi wepeni kanye namaphrinta ama-3-D? Kuyaxaka isayensi, yilokho. Ososayensi basebenzise iphrinta eyi-3-D ukudala izibalo ezingama-33 ezinjengomthondo zobude nobude obuhlukahlukene ( zibone lapha, bese uziphrinte eyodwa uma uthanda kangaka !) ngoba, 'Ucwaningo lwezintandokazi zesayizi wepenisi yabesifazane luye ngokuthembela kuzilinganiso zabo ezingabonakali noma ukukhetha phakathi kwe-2-D, izithombe ezingenalutho,' kusho ucwaningo. Kulungile-ke.
i-wax yaseBrazil ongayilindela
Ucwaningo, olushicilelwe izolo ephephabhukwini lesayensi BEKA KANYE , okuhloswe ngayo ukuhlola ukuthi ngabe umongo wobudlelwano (yithi, ukuma kobusuku obubodwa uma kuqhathaniswa namandla esikhathi eside) kuthinte izintandokazi zabesifazane ngosayizi.
Isinqumo? Ngokusobala abesifazane banayo okukhudlwana izindinganiso zokuma kobusuku obubodwa kunesithandwa sesikhathi eside. Ngokuya ngocwaningo, 'Abesifazane babethanda ipipi lesilinganiso esikhudlwana nobude besikhathi esisodwa (ubude = 6.4 amayintshi / 16.3 cm, umjikelezo = 5.0 amasentimitha / 12.7 cm) uma kuqhathaniswa nesikhathi eside (ubude = 6.3 amayintshi / 16.0 cm, umjikelezo = 4.8 amayintshi / 12.2 cm) abalingani ocansini. '
Ukulinganisa lezi zigaba zombili, kubukeka sengathi ubude bepipi obungu-6.35 amayintshi nobubanzi bama-intshi angu-4.9 bungahle buhle kunoma yiluphi uhlobo lobudlelwano, okungenani ngokususelwa kule datha. Uma kunjalo, kubukeka sengathi umthondo omaphakathi e-US wehla u-1/3 we-intshi ufushane kwabesifazane abaningi: 'Ngokuya ngezifundo ezedlule ... isilinganiso sobude bepenisi yaseMelika silinganiselwe njengamasentimitha ayi-6 (15.2 cm) nokuzungeza kungamasentimitha ama-5 (12.7 cm), 'ucwaningo luyachaza.
Ucwaningo lubandakanya abesifazane abangama-60 abaneminyaka yobudala esuka ku-18 kuya ku-65, bonke abahlali baseCalifornia. Amaphesenti angamashumi amabili nesikhombisa wabo ayebuqedile ubudlelwano ngenxa yokuthi okungenani ngokwengxenye ngosayizi wepenisi ongagculisi (kwirekhodi, kucashunwe kakhulu ukuthi inkinga bekuyipipi elincane kakhulu, hhayi elikhulu kakhulu). Uma uzithola usezonqenqemeni lwesinqumo esifanayo, mhlawumbe nikeza lawa macebiso ezocansi ukuthi uqale ubone ukuthi ungakwenzela ukungabi bikho kosayizi ngezinye izindlela.
Okuningi kusuka ku- Ubuhle :
unkulunkulukazi kwamagoda abesifazane abamnyama
kungani kungadlalwa i-alex morgan
lelikhandlela linuka okomuntu wami wobulili